တပ်မတော်၏ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် သပ်လျှိုသွေးခွဲေ? - Yangon Media Group
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် သပ်လျှိုသွေးခွဲ နေသူများအား ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲတွင် တောင်းဆိုတိုက်တွန်းချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါပွဲအား ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမပတ်အတွင်း ဒဂုံမြို့နယ် မြို့မကျောင်းလမ်းရှိ မိုင်ဒါကွင်း(မြို့မကွင်း)၌ တပ်မတော်ချစ်မြတ်နိုးသူများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်အတွင်း ထုတ်ပြန်ထားချက်များအရ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ယူနီဖောင်းများ ဖန်တီးဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုရန် ညွှန်ကြားချက်များအရ လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုတိုက်တွန်းကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်း ကျွန်းမြို့နယ်ရှိ သုဝဏ္ဏလူငယ်လေ့ကျင့်ရေးဝင်းအတွင်း ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင်လုံ ကြိုဆိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးသရုပ်ဖော် ဖျော်ဖြေမှုများအား ၈၈ မျိုးဆက်(ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)မှ ဦးမင်းကိုနိုင်က ဦးဆောင်ကာ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပွဲနှင့်ပတ်သက် ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး သရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုများအား ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ တပ်မတော် ချစ်မြတ်နိုးသူများမှလည်း ရှုတ်ချကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအပြုအမူများသည် တပ်မတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပုံရိပ်ကို များစွာထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းကြောင့် ငြိမ်းချမ်း ရေး သရုပ်ဖော်ပြကွက်အား စီစဉ်တင်ဆက်သည့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအပြင် ကလေးစစ်သား သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍မှားယွင်းစွာ မသိနားမလည်ဘဲ ပြောကြားသည့် ဦးမင်းကိုနိုင်တို့အား တပ်မတော်အနေဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရုံသာမက နောက်နောင် အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုး မပြုလုပ်စေရန် ထိရောက်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ပြော ကြားခဲ့သည်။
”မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးကို သပ်လျှိုသွေးခွဲနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဒါကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း သိစေချင်လို့ ဒီပွဲကိုလုပ်ဖြစ်တာပါ”ဟု တပ်မတော်ချစ်မြတ်နိုးသူများအဖွဲ့မှ ကိုရဲစိုးအောင်က ပြောသည်။ အဆိုပါပွဲအား မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်မြတ်နိုးသူများ အဖွဲ့(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)မှ ဦးစီးကျင်းပကာ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် စသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ တပ်မတော်ချစ်မြတ်နိုးသူများ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်များ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီ ညွတ်ရေးပါတီဝင်များ၊ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားသူများ နှင့် တပ်မတော်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၊ အမျိုးသားရေး ဆရာတော်များ၊ အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပွဲတွင် အမျိုးသားရေးဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တာဘိဝံသမှ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာကို တိုက်ကြီး ဆရာတော် ဦးဇနိတက ဖတ်ကြားသည့်အပြင် ရှင်မတောင် ဆရာတော်မှလည်း တပ်မတော် ထောက်ခံကြောင်း မိန့် ကြား ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဒေါ်ဆွေဇင်ဦးနှင့် ဦးလှဆွေတို့မှ တပ်မတော်အား ထောက်ခံကြောင်းနှင့် တပ်မတော်အား ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် ပြောဆိုလုပ် ကိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ယင်းအပြင် တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များတွင် အထင်ကရပါဝင်ခဲ့မှုများ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့ပုံများကို ဟောပြောခဲ့ကြ သည်။
တောင်သမန်အင်း တိမ်ကောပြီး ကုန်းမြေသက်သက် ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် မန္တလေးမှာ မြေအောက်ရေရရှိမှု အခက
ကျွန်းလှနှင့် ကောလင်း မြို့နယ်စပ်ရှိ သဖန်းဆိပ် ဆည်အတွင်း တရားမဝင် ရွှေမျောဖောင် ကိုးခုအား သ?
အုတ်ရေကန် ပြုလုပ်ရန် မြေတူးရာမှ ကျည်ဆန်၊ ကျည်ဆန်ထိပ်ဖူးနှင့် ကျည်အခွံ ၇ဝဝ ကျော်ခန့် တွေ့ရှ?
မန္တလေး တက္ကသိုလ်မိသားစုမှ တမာနန်း အလှပြယာဉ် မန္တလေး သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲမည်